Adlulele kuma-quarterfinals AmaSpringboks ecoboshisa iCanada
Amatries amaBoks ashaywe uDamian De Allende, uCobus Reinach oshaye amathathu, Sbusiso Nkosi, Schalk Brits, France Malherbe noDamian Willemse obedlala okokuqala kuleNdebe yoMhlaba kwazise uvale isikhala sikaJesse Kriel olimele emdlalweni odlule. Isithombe: AP
Sphamandla Gumede | October 8, 2019
AZIBEKISELE indawo kuma-quarterfinals amaSpringboks abhudluze iCanada ngo 66-7 emdlalweni wamaqoqo eNdebe yoMhlaba yebhola lombhoxo eqhubekayo eJapan.
AmaSpringboks anyukele esicongweni eqoqweni lesibili ngamaphuzu angu-15 emuva kwemidlalo emine. Amatries amaBoks ashaywe uDamian De Allende, uCobus Reinach oshaye amathathu, Sbusiso Nkosi, Schalk Brits, France Malherbe noDamian Willemse obedlala okokuqala kuleNdebe yoMhlaba kwazise uvale isikhala sikaJesse Kriel olimele emdlalweni odlule.
Bekulindelekile ukuba amaBoks azidlele amahlanga kwiCanada njengoba ingakaze inqobe nowodwa umdlalo selokhu kuqale leNdebe yoMhlaba. ICanada ithole umthobanhliziyo ngesiwombe sesibili ishaya itry ehamba ne-conversion.
Emidlalweni emibili eyedlule, amaSpringboks acoboshise i-Italy neNamibia kodwa asengcupheni yokwehlela endaweni yesibili kuleli qoqo njengoba iNew Zealand izobambana ne-Italy emdlalweni wokugcina ngoMgqibelo eToyota Stadium. Leli qembu eliphekwa uRassie Erasmus lahlulwa abavikeli besicoco ama-All Blacks emdlalweni wokuqala wamaqoqo ngoSepthemba 21.
Imidlalo yama-quarterfinals izoqala ngo-Okthoba 19. INingizimu Afrika ihubha isicoco sesithathu seNdebe yoMhlaba yebhola lombhoxo, eyagcina ukusinqoba ngo-2007 ishaya i-England.